Ahoana no ahafahan'ny fikarohana amazonin'ny fikarohana am-panaovana an'i Amazon ho fiantraikan'ny fanatsarana ny lisitrao
Tsy ampy ny vokatra azo amin'ny fivarotana amin'ny Amazon. Mila manao ity vokatra ity ho an'ny mpanjifa mety ianao. Ny fampielezan-tsosoka isan-karazany dia tokony hanomboka amin'ny fikarohana amin'ny teny fanalahidy vokatra. Izany dia manampy ny mijoro tsara kokoa noho ny mpifaninana ary manao fivarotana tsaratsara kokoa. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny manatsara ny lisitrao miaraka amin'ny teny fikarohana sy be dia be. Raha vao nametraka ny raharaham-barotra vao haingana ianao, dia manoro anao aho hampiasa ny teny fanalahidy tsy mifanentana tsy mifanentana. Ampiasao izy ireo, afaka hahatratra ny laharana avo indrindra ianao amin'ny alàlan'ny niches kokoa. Ny tenifototra dia toy ny connecteurs amin'ny bara fitadiavana ny pejy fandraiketanao. Izany no mahatonga azy ireo ilaina indrindra. Raha te hahazo ny teny fanalahidy mety ianao, dia mila mitarika fikarohana momba ny varotra anao ianao ary mandinika ny fitondrantenan'ny mpampiasa.
Misy fomba roa azo hikarohana ireo teny manan-danja manan-danja amin'ny lisitry ny fanatsarana ny Amazon - manitsy sy automated. Ny farany no safidy tsara indrindra ho an'ny mpivarotra an-tserasera an-tserasera izay tsy manana fotoana malalaka handany azy amin'ny fikarohana ara-tsosialy.
Raha faly amin'ny fampiasana fitaovana fikarohana matihanina ianao, dia hahazo lisitra ny tsara indrindra ho an'ny teny fanalahidin'ny orinasa mifototra amin'ny fikarohana momba ny fitadiavana mpanjifa Amazon ao anatin'ny fotoana fohy (latsaky ny adiny iray). Mba hahitana ireo teny fanalahidy tena manan-danja, mila mampiasa filtre manokana ianao ary manaiky ny tian'ny mpanjifanao mety aminao, ary koa ny lahy sy ny vavy, ny taonany na ny toerana misy azy. Ankoatra izany, mila mandinika ny volavolan-dahatsary amin'ny tanjona voafaritra ianao. Jereo hoe inona avy ireo lisitry ny teny nalaina avy amin'ny lisitra noraisina ary tsy mendrika ny sainao. Tokony hanamarina ny asan'ny fikarohana tsirairay mandritra ny volana lasa. Raha te hanangana fanentanana dokam-barotra ianao dia tokony hanamarina ihany koa ny fividianana fividianana isaky ny teboka voafantina tianao hotendrena.
Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny rafitra fandaharana sasany amin'ny Amazon ary ny fitaovana ampiasaina hananganana ny vokatra amin'ny pejy Amazon finday.
Alohan'ny hahatongavantsika amin'ny fanadihadina momba ny fikarohana fikarohana momba ny fikarohana, dia andeha isika hiresaka hoe ahoana no ahitantsika ny algorithm amin'ny alàlan'ny fikarohana ity rafitra ity.
Amazon dia mampiasa karazana algorithms sy metrisy maromaro mba hampisehoana ny mpampiasa fotsiny ireo vokatra azon'izy ireo latsaky ny baolina. Mijery ireo hetsika rehetra ao amin'ny tranokala izy ireo, anisan'izany ny fividianana taloha, ny safidy, ny faniriana ary ny toy izany. Ny fitaovana fanoratana anarana izay antsoina hoe A9 dia manome ny mpampiasa ny tolo-kevitra tsara indrindra ao amin'ny tranokala iray.Ny mpisera Amazona tsirairay dia mandray ny soso-kevitry ny pejy SERP, arakaraka ny filany sy ny zava-niainany teo aloha niaraka tamin'io sehatra varotra io. Rehefa mahazo hafatra mazava amin'ny filàn'ny mpampiasa sy ny preferences i Amazon,
Tools for conducting search keywords Amazon
Misy dikan-teny roa amin'ny Amazon Keyword Tool - maimaim-poana sy karama. Samy mahasoa ny raharaham-barotrao izy ireo. Na izany aza, ny salanisa dia manome avo roa heny kokoa ny teny fanalahidy manan-danja raha oharina amin'ny dikan-teny maimaim-poana.
Andeha isika hilaza ny fomba fiasa. Ampidiro ao amin'ny boaty fikarohana sokajy Keyword ny tenimiao voadidy voatokana ary fidio ny departemanta izay tianao hampiroboroboana ny vokatrao (apps and games, or clothing). Avy eo ianao dia mila mifidy ny firenena izay tianao hampiroboroboana ny zavatrao sy ny fiteny farany. Mila minitra maromaro (hatramin'ny 10) ny rafitra iray manova ny fangatahanao. Aorian'izany dia hahazo lisitry ny soso-kevitry ny teny fanalahidy ianao miaraka amin'ireo teny fototra an-jatony lava lava mifototra amin'ny endri-tsoratra Amazon Source .